नेपालीले मरिमेटी अनलाइन भोट गर्दा पनि मिस अर्थमा अवार्ड किन जितेन? किनकि साइट नै गलत थियो – MySansar
नेपालीले मरिमेटी अनलाइन भोट गर्दा पनि मिस अर्थमा अवार्ड किन जितेन? किनकि साइट नै गलत थियो
Posted on October 26, 2016 October 28, 2016 by Salokya
फिलिपिन्समा भइरहेको मिस अर्थ २०१६ को अनलाइन फोटोजेनिक भोटिङ विजेता सार्वजनिक गरिएको छ। यसमा स्वर्ण भियतनाम, रजत म्यान्मार र कास्य भेनेजुएलाकी सुन्दरीले जितिन्।
यो प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट रोशनी खत्री सहभागी भएकी थिइन्। उनले मात्र हैन, पूर्व मिस अर्थ नेपाल नगमा श्रेष्ठ र वर्तमान मिस नेपाल अस्मी श्रेष्ठले पनि नेपाली सुन्दरीलाई भोट हाल्न फेसबुकबाट आह्वान गरेकी थिइन्। नेपालीहरुले पनि मरिमेटी भोट गरेका र उनीहरुको आह्वानलाई सेयर गरेका थिए। तर पनि किन अवार्ड जित्न भने सफल भएन त? जबकि उनीहरुले भोट गर्न आह्वान गरेको लिङ्कको भोट हेर्दा तेस्रो स्थान नेपालकै छ। किनभने उनीहरुले दिएको साइट नै गलत थियो।
यसबारे माइसंसारमा उतिबेला नै ब्लग पनि लेखिएको थियो। यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्
सुन्दरीहरुले भोट गर्ने आधिकारिक साइट के हो भन्ने पत्तै नपाई हचुवा तालमा लिङ्क सेयर गर्दै भोट माग्दा यस्तो भएको हो। सुन्दरीहरु लगायत अरु धेरैलाई पनि Missology भन्ने साइटमा हुने ब्युटी कन्टेस्टका लागि भोटिङ प्रतियोगिताको आधिकारिक हो र यसमा जिते अवार्ड नै पाइन्छ भन्ने भ्रम छ। तर त्यसो होइन। यो एउटा सामान्य जानकारी दिने साइट मात्र हो। यसमा गरिने भोटिङ रमाइलोको लागि मात्र हो।
तर सुन्दरीहरुले यसैलाई आधिकारिक ठाने। यसरी आह्वान गरे-
उनीहरुले आह्वान गरे अनुरुप नेपालीहरुले मरिमेटी भोट गरेर तेस्रो स्थानमा नेपाललाई पुर्‍याए पनि। हेर्नुस् स्क्रिनसट नेपालले पाएको भोट
तर नतिजा यस्तो आयो-
#MissEarth2016 Online Photogenic Voting winners:
Bronze: Venezuela pic.twitter.com/RS8XIekdw9
— Miss Earth (@MissEarth) October 25, 2016
अझै पनि सुन्दरीहरुलाई यसबारे पत्तो छैन। जापानमा मिस इन्टरन्यासनलमा सहभागी भइरहेकी वर्षा लेखीले पनि यही मिसोलोजीको साइटमा भोट हाल्न आह्वान गरेकी छिन्-
नेपालीहरु मरिमेटी भोट हालिरहेका छन्। अनि कुरै नबुझी समाचार पनि बनिरहेको छ-
लास्टमा यसमा पनि हुने उही हो। यो वाहियातको केही नपाइने अनलाइन भोटिङमा लागेर समय खेर फाल्नुभन्दा अरु नै उपलब्धिमूलक केही काम गर्दा वेश हुन्छ है।
अपडेट : मिस इन्टरन्यासनलमा सहभागी भएकी सुन्दरी वर्षा लेखीले आफू खाली हात फर्कनु नपरेको र अवार्ड पाएको दावी गर्दै फेसबुकमा एउटा भिडियो राखेकी छिन्
जबकि मिस इन्टरन्यासनलको अवार्ड घोषणामा उनले यो अवार्ड पाएको देखिँदैन। हेर्नुस् भिडियो-
मिस इन्टरन्यासनलको आधिकारिक साइटमा पनि उनले कुनै अवार्ड पाएको उल्लेख छैन। कसले के अवार्ड पाए यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ
3 thoughts on “नेपालीले मरिमेटी अनलाइन भोट गर्दा पनि मिस अर्थमा अवार्ड किन जितेन? किनकि साइट नै गलत थियो”
dherai ramro jankariko lagi dhanyabad
सुन्दरी प्रतियोगिता भयो कि ब्लग हान्दिहाल्ने?